Luis de Góngora. Chirangaridzo cherufu rwake. 6 akasarudzwa mamoneti | Zvazvino Zvinyorwa
Luis de Góngora. Mufananidzo weVelázquez.
Luis de Gongora iri, zvisinei nezvinodiwa munhetembo dzeumwe neumwe, nyanduri yakanyanya yepakutanga uye ine simba kweiyo Golden Age ChiSpanish, uko kwaive nekwakadzika kwemanyanduri epakutanga uye ane simba. Nhasi chi gore rekufa idzva weuyu asingafi Cordoba murume nekusingaperi mune rake basa reizvozvo mutauro wakaoma kunzwisisa, izere ne hyperbole, mucherechedzo uye chitendero, periphrasis uye zvisingaite zvivakwa. Kukuyeuchidza iwe, iyi iri kusarudzwa kwevamwe vavo sonnets.
1 Luis de Góngora neni
2.1 Ndichiri kukwikwidza nevhudzi rako
2.3 Kune godo
2.5 Yatove kutsvoda kristaro yakajeka maoko
2.6 Kunyorerwa guva reDominico Greco
Luis de Góngora neni
Unofanira kuzvibvuma. Chero ani anoverenga Góngora uye anomunzwisisa (kana kufunga kuti anoita) kekutanga munhu ane rombo rakanaka. Kwete kunyange mune yangu nyoro nyoro mwana mwana wechikoro, pawakatanga kuverenga (kana kuyedza kuverenga) ngano ye Polyphemus uye Galatea, kwete izvozvi panguva yeku hafu yezana ramakore Ini ndakakwanisa kutevera akanaka Don Luis. Apa ndipo zvakare panokwezva, iyo runako of his zvibhakera isu uye izvo kumonyanisa a mutauro vashoma ndivo vaiziva kusanganisa senge uyu mudetembi weCordovan nyanduri.
Uye, pakupedzisira, ichokwadi kuti unogara naye dialectical duel uye kuvava pasina zvakaenzana zvawaive nazvo nemumwe chikara chehunhu hwake, kunyangwe achitaura zvakanyanya sezvaaive Don Francis Quevedo. Asi zvakare nenyaya yekuti Don Miguel de Cervantes akamurumbidza kusvika pakusingaperi. Nemaziso anopihwa nezera uye nezvimwe zvakawanda kuverenga, tarisa izvozvi kuGóngora Inoramba iri kupokana, asi yake hunhu pamwe nemashoko.
Ndichiri kukwikwidza nevhudzi rako
Panguva yekukwikwidzana nevhudzi rako,
kupenya kwezuva kunopenya nezuva pasina;
apo nekuzvidza pakati pebani
tarisa pahuma yako chena iyo yakanaka lilio;
apo kumuromo mumwe nemumwe, kuibata,
mamwe maziso anotevera kupfuura kutanga kwekutanga;
uye vachiri kukunda nekuzvidza kukuru
kubva kukristaro inopenya mutsipa wako munyoro;
anofarira mutsipa, vhudzi, muromo nehuma,
pamberi pezvaive muzera rako regoridhe
goridhe, lilium, carnation, inopenya kristaro,
kwete chete mune sirivheri kana viola troncada
inotendeuka, asi iwe uye iwe pamwe chete
pasi, muutsi, muguruva, mumumvuri, musina chinhu.
Haiwa madziro marefu, o korona shongwe
Yekukudzwa, yehukuru, yegorantry!
Oo rwizi rukuru, mambo mukuru weAndalusia,
Yejecha rakanaka, sezvo isiri yegoridhe!
Haiwa bani rakaorera, o makomo akasimudzwa,
Iyo inokudza denga uye inovaka zuva!
O nguva dzose kubwinya nyika yangu,
Zvakawanda kune minhenga seye minondo! Kana pakati peaya matongo nezvakapambwa
Izvo zvinopfumisa Genil naDauro vanogeza
Ndangariro dzako dzaisave chikafu changu,
Usambofa wakakodzera maziso angu asipo
Ona rusvingo rwako, shongwe dzako uye rwizi rwako,
Mapani ako nemakomo, o kumusha, o ruva reSpain!
Haiwa mhute yenyika yakanyarara,
Hellish hasha, yakaipa-yakaipa nyoka!
Oo ine chepfu yakavanzwa nyoka
Kubva pagreen meadow kusvika pachipfuva chinonhuwirira!
O pakati pemukaka wePoison unofa rudo,
Kuti mugirazi rekristaro unotora hupenyu!
O pfumo pandiri nebvudzi rakabatwa,
Kubva kune yakaoma yakaoma brake spur!
Ah kushingairira, kwekusingaperi kwekuuraya kunzwirwa tsitsi!
Dzokera kunzvimbo inosuruvarisa kwawanga uri,
Kana kuumambo (kana iwe uchikwana ipapo) wekutya;
Asi haukwane ipapo, nekuti pakave nezvakawanda
Kuti iwe unodya iwe pachako uye haupedze,
Unofanira kuva mukuru kupfuura gehena pacharo.
Spanish Anacreon, hapana anokumisa,
Usati neruremekedzo rukuru,
Kuti sezvo tsoka dzako dzakaita elegy,
Kuti kupfava kwako kwakagadzirwa nesirasi.
Iwe hausi kutevedzera iyo yakasarudzika Lope,
Kupfuura Bellerophon mazuva ese
Pamablogi enhetembo dzinonakidza
Anopfeka mbichana, ndokumupa kumhanya?
Nekunyatsotarisirwa zvishuwo zvako
Vanoti ivo vanoda kuturikira muchiGreek
Maziso ako anga asina kuatarisa.
Vatorerei kwekanguva kuziso rangu bofu,
Nekuti kujekesa ndakaburitsa mamwe mavhesi ehusimbe,
Uye iwe unonzwisisa chero gregüesco gare gare.
Yatove kutsvoda kristaro yakajeka maoko
Atove kutsvoda kristaro yakajeka maoko,
atove kundirovera kumuchena uye wakatsetseka mutsipa,
kutotambanudza vhudzi iro pamusoro pake
rudo rwaakadhonza kubva mugoridhe remigodhi yake,
kutopaza maparera iwayo akanaka
mazwi anotapira chiuru chisina kukodzera,
kutobata muromo wega wega wakanaka
maruva epepuru asingatyi minzwa,
Ndakanga, o yakajeka zuva rine godo,
apo mwenje wako, uchikuvadza maziso angu,
zvakauraya mbiri yangu uye rombo rangu rakapera.
Kana denga risina kushoma simba,
nekuti ivo havapi zvako zvinoshungurudza,
Damn, semwanakomana wako, anokupa kufa.
Kunyorerwa guva reDominico Greco
Iri muchimiro chakashongedzwa, oh pilgrim,
yekupenya porphyry yakaoma kiyi,
bhurasho rinoramba rakapfava nyika,
uyo akapa mweya kuhuni, hupenyu kune rineni.
Zita rake, rinotonyanya kufema dino
kuti mumatumburu eMukurumbira zvinokwana,
munda unoratidzira kubva pamarble iyoyo yeguva:
mutsiure uye pfuurira munzira yako.
ChiGiriki chinonyepa. Nhaka Yenhaka
Art; uye Art, kudzidza; Iris, mavara;
Phoebus, mwenje -kana kwete mimvuri, Morpheus-.
Yakawanda kwazvo urn, kunyangwe iri kuomarara,
misodzi inonwa, uye kangani ziya rinonhuwirira
Sabeo muti wemariro kuhukura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Luis de Góngora. Chirangaridzo cherufu rwake. 6 akasarudzwa mamoneti